Guddiga amniga Qaranka ee baarlamaanka oo la kulmay Wasiirka Amniga iyo saraakiil ciidan – Radio Muqdisho
Guddiga Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan la qaatay Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga ayaa looga hadlay xoojinta amniga iyo sidii loo dar dargelin lahaa.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ah uruurrinta hubka sharci darrada ah, xoojinta xiriirka hay’adaha Nabadgelyada iyo shacabka, tayaynta ciidamada ammaanka iyo sidii loo xoojin lahaa Nabadgelyada.
Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed Wasiirka Amniga gudaha iyo saraakiishii ka qeyb gashay kulanka ayaa la waydiiyay su’aalo la xiriira xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan tan caasimadda.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Xidlhibaan Daahir Amiin Jeesow oo markii uu kulanka soo idlaaday kaddib la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid su’aallo lagu weydiinayay Wasiirka iyo wixii horumar ah oo xagga amniga ku saabsan.
“Waxyaabo badan ayaan ka wada hadalnay, oo muhiim u ah xagga amniga, balaarinta xafiisyada Wasaaradda, dajinta istaraatiijiyad amnniga, dib u habeynta ciidanka iyo tayayntooda, la dagaallanka argagixisada abaabulan, dhowrista xaquuqda aadanaha, ilaalinta kaabayaasha dhaqaale, horumarinta iyo xiriirka iskaashiga heer gobol iyo heer caalami, intaas ayaan ka wada hadalnay, guul ayayna noogu soo dhamaatay” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Kulankaan ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo guud ahaan aminga dalka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa Wasaradda iyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka.
Kooxda Arsenal oo Ka Adkaatay Kooxda Liverpool “Sawirro”
Xuska sanadguurada Warbaahinta Qaranka oo iminka ka socoto xarunta Wasaaradda Warfaafinta "SAWIRRO"